ရောဂါမျိုးစုံ သက်သာစေခြင်း………… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ရောဂါမျိုးစုံ သက်သာစေခြင်း…………
Posted by snow white on Jul 4, 2012 in Drama, Essays.. | 13 comments
သွေးတိုးရောဂါ ရှိသူများသည် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကြက်သွန်ဖြူဥတလုံး ကို တစ်လုံးကနေ ၃လုံးထိနေ့စဉ်စားသုံးခြင်းဖြင့် သွေးတိုးရောဂါကိုလျော့ကျစေပါတယ် စိတ်ဖိစီးမှု လျော့နည်းအောင်နေခြင်းသည်လည်း သွေးတိုးရောဂါ ကို သက်သာစေပါတယ်။။။။။
ရေဗြင်းရောဂါဖြစ်ပွားရခြင်းသည် ရေသောက်ရာတွင် စနစ်မကျမှုကြောင့်ရေဗြင်းရောဂါဖြစ်ပွားစေနိုင်သည် ။ ရေကို အ်ိပ်စက်ပြီးသောက်ခြင်းသည် ရေဗြင်းရောဂါဖြစ်ပွားစေသောအဓိကအချက်ပင်ဖြစ်သည်။။။။။။။။
ကလေးများဝမ်းတအားချုပ်တက်တဲ့ကလေး များဆေးသောက်ရတွင်လည်းခက်ခဲစွာတိုက်ရ သည်တိုက်ရခက်ဖြစ်နေသူများသည် ဖီးကြမ်းဌက်ပျော သီးတစ်လုံးကို မီးဖုတ် ပြီး ကျွေးခြင်းဖြင့် ၀မ်းချုပ်မှုကို ပျောက်ကင်းစေပြီး ၀မ်းမှန်စေပါသည်။။။။။။။။။
ပြောပြမှာ ပေါ့ချစ်ညီမလေးသိတဲ့ရောဂါဆိုအကုန်ပြောပြမယ် မြေဖြူ ရယ်ဂျင်းရယ် ကို ထောင်း ညှပ်နေအောင်ထောင်း ပြီးပုဆိုးစုပ် ဖြင့် ဒူးစွပ် ဖြစ်ဖြစ်နဲ့စည်းထားခြင်း ဖြင့်မမwater-melon ဖြစ်နေတဲ့ ဝေဒနာကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ် မမလက်တွေ့သက်သာရင်စနိုးကိုဘာပေးမှာလည်း စနိုးတို့အဒေါ်တွေကောစနိုးအမေကော ဒူး ကိုက်သမားတွေကြီးတွေပါဘဲ သက်သာပါတယ် လက်တွေ့လုပ်ကြည့်လိုက်ပနော်။
ခုလို ဆေးနည်းလေးတွေမျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါစနိုးရေ။
ရေကို အိပ်စက်ပြီးသောက်ရင် ရေဗျင်းစွဲလားးး
မမနိုရာ ညီမလေးစနိုး စလုံးမှားတာ ကိုမပြောဘဲဒီတိုင်းလေးငြိမ်ပြီးပြင်ပေးသွားတယ်နော် ကျေးဇူးတင်တယ်နော် ။
ပြောဖို့မေ့သွားလို့ တကယ့်လက်တွေ့ကို ဆရာဝန်ကပြောလိုက်တာ စနိုးအဒေါ်က၀လွန်ထဲမှာတောင်ပါတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ် သူဗိုက်ကတော် တော်ကြီးတယ် စနိုးတို့က၀လို့ ဗိုက်ပူတယ်ဘဲထင် တာ 19.6.12 ကဆေးရုံတင်ရတယ် ရောဂါကစုံလို့ပေါ့ ဒါပေမယ့်လန့်သွားတာကရေဗျင်းဆွဲတာတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးနဲ့သွားတွေ့တော့ဆရာဝန်ကပြောလိုက်တာပါ ရေသောက်ရင် ရိုးရိုးတန်းတန်းမတ်တပ်ရပ်သောက်တာ ထိုင်သောက်က ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဖြစ်စေဘူးတဲ့ ရေကိုအိပ်စက်ပြီးသောက်သုံးခြင်းသည်သာရေဗျင်းရောဂါကိုဖြစ်စေပါတယ်တဲ့လေ။
ဟံမာမင်း အဖြစ်ဆိုးလှချည်လား မောင်လေး မိုးဇက်ယဲ့. အဲ့အဲ့
ဟုတ် ကျေးကျေးပါ တင်ပြပေးလို့
ဘာလိုသေးလဲ ဦူးဂျီး ရယ်
စနိုးရေ ..အိမ်တွင်း ဆေးနည်းလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးပါနော် … ။
ဒါပေမယ့် … ရေဗြင်းရောဂါဖြစ်ပွားရခြင်းသည် ရေသောက်ရာတွင် စနစ်မကျမှုကြောင့်ရေဗြင်းရောဂါဖြစ်ပွားစေနိုင်သည် ။ ရေကို အ်ိပ်စက်ပြီးသောက်ခြင်းသည် ရေဗြင်းရောဂါဖြစ်ပွားစေသောအဓိကအချက်ပင်ဖြစ်သည်။။။။။။။။ ဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ .. သိပ်သဘောမကျမိဘူး … ။ ရေဗြင်းရောဂါဖြစ်တာ … အဲ့ဒါကြောင့်တော့ မဟုတ်နိုင်ဘူး .. ကြားဖူးနားဝလေးရှိပေမယ့် အမှားပါသွားမှာဆိုလို့.. သေချာ ဂဃနဏမပြောတော့ဘူးနော် .. နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေ ၊ ဗဟုသုတလိုက်စားသူတွေ ၀င်ပွားဖို့ ထားပေးခဲ့ပါမယ် … ။
ချန်နယ်လ်ဆဲဗမ်း မှာ ခဏခဏ မြင်ရတဲ့ .. ချစ်ချက်အစီစဉ် ကြော်ငြာတဲ့အခါ … သန္တာလှိုင်ပြောတာလေး .. မှတ်မိလားဟင် .. ဘာတဲ့ … ရေမဆာပဲ ရေသောက်လျှင် ရေဖောရောဂါဖြစ်တတ်တဲ့ အဲ့ဒါသိလား ဆိုပြီးပြောတာလေ … ။ ခဏတာ ပြတာလေးမို့ .. တဖက်လူက သိတယ်ပြန်ဖြေလား ၊ မသိဘူး ပြန်ဖြေလားတောင်မပြခင် …. တခြားရိုက်ကွက်တွေဘက်ရောက်သွားပါတယ် … ။ သန္တာလှိုင်ပြောတာတော့ ယုံကြည်ချက် အပြည့်နဲ့ပေါ့နော် ….
ကိုယ်နေတိုင်းသောက်နေတဲ့ ရေ .. ရေဆာလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ မဆာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သောက်ခဲ့ဖူးမှာပါ ..သူပြောသလိုတော့ ရေဖောရောဂါ မဖြစ်တာ ကိုယ်တွေ့ပါ … ။ အဲ့လိုလေးတွေရှိတတ်တဲ့ သဘာဝကို ပြောပြတာပါ .. မီဒီယာတွေမှာ ပိုင်းတိုင်း ၊ စာဆောင်တွေမှာ ပါတိုင်း ရာနှုန်းပြည့် အမှန်လို့ တွက်ယူမရတာကို ပြောတာပါ … ချင့်ယုံဖို့ပါနော် ။
ေ၇ဖျင်းစွဲ ၇ခြင်းရဲ့ အဓိက ကတော့ေ၇သောက်လို့ ဟုတ်ပါဘူး အရင်တုံးက ၀မ်းကိုက်ေ၇ာဂါ ရှိခဲ့တဲ့ လူတွေက ၀မ်းစကိုက်ချိန်မှာ ဆေးကို စနစ်တကျ မသောက်တာ၇ယ် အသဲေ၇ာင်ေ၇ာ ၈ါကြောင့် အသဲပျက်စီးနေတာ၇ယ် ကြောင်ပါ ၀မ်းကိုက်တာ ဖြစ်ရင် ဆေးသောက်တဲ့ ခါေ၇ာဂါ သက်သာလာပြီဆိုပြီးဆေးကိုမဖြတ်ပစ်ပါနဲ့ သပမာ metroပေးတယ်ဆိုရင် ဆ၇ာဝန်က တရက် ၂ လုံး ၃ကြိမ် ၄ရက် သောက်ခိုင်းတယ် ဆိုပါတော့ ၂ ၇က်လောက် သောက်ပြီးေ၇ာ ၈ါ သက်သာတယ်ဆိုပြီးဆက်မသောက်တော့ တာမျိုးပါ ဆေးတ မျိုးက လည်ပတ်ဘို့ကို အနည်းဆုံး ၃ရက်သောက်၇ပါတယ် အထူးသဖြင် antivius ဆေးတွေကို သောက်ရင် အနည်းဆုံး ၃ရက်ထက် လျှော့မသောက်ဘို့ ပါ